ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက် Dirty Talk လုပ်နည်း
တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက် Dirty Talk လုပ်နည်း
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: မေ. 25 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုတွေ့မြင်စုံတွဲများရုပ်ရှင်များထဲမှာညစ်ပတ်ပြောဆိုပါပြီ, ပင် TV နဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာဖတ်ပေမယ်ပင်အလုပ်လုပ်သလဲ? ထိုအပိုအရေးကြီးသည့်အချက်မှာ, သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးသို့ညစ်ပတ်ဆွေးနွေးချက်မိတ်ဆက်ပေးသင့်ပါသည်?
လူကြိုက်များယုံကြည်ချက်ကိုဆန့်ကျင်, ညစ်ပတ်ပေရေပြောနေတာအခါသင်လိုချင်သော effect ကိုရနိုင်ဖို့အတွက်ထွက်လိုက်တယ်သို့မဟုတ်စကားတခွန်းကိုမျှပြောရန်မလိုအပ်ပါ. အောက်ကအကြံပြုချက်တွေကိုလိုက်, ဆဲသင်သည်ဖြစ်ခြင်းနေစဉ်သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်အသက်ရှင်ရန် zest add နိုင်ပါတယ်.
Spice ထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်း: နံ့သာမျိုးကိုချက်ပြုတ်ရန်အရသာ add ရုံနဲ့တူ, ညစ်ပတ်ပေရေသောစကားပြောခြင်းဆက်ဆံရေးကိုမှအရသာထပ်ဖြည့်. သို့သော်, သင်သိပ်ညစ်ပတ်စကားကဲ့သို့သတိထားဖ​​ို့လိုအပ်ပါ, ပဲလွန်းအမွှေးအကြိုင်နှင့်တူ, ပျင်းစရာကောင်းနေလိမ့်မည်ကိုပင်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုဖျက်ဆီးနိုင်တယ်. စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပျော်စရာထည့်သွင်းဖို့, အနည်းငယ်သောကြောင့်သင့်ရဲ့အဖော်များညစ်ပတ်ပေရေစကားပြောဘူးအခါတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်များနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်လိမ့်မည်ထိုလမ်းကိုအသုံးကြိုးစား.
ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ Stay: အရေးအပါဆုံးအစွန်အဖျားဘာလုပ်သင်နှင့်အတူအဆင်ပြေဖြစ်ကြောင်းအဘယ်သို့ဆိုရန်ဖြစ်သည်. က explicit သို့မဟုတ်ပါးနပ်သောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင်ကဟုပြော ဆို. လွန်းမသက်မသာမှန်လျှင်အလွန်အလားအလာလည်းအဆင်မပြေမှုတ်တော်မူမည်. ထိုအပြည့်အဝရိုးသားဖို့, အဆင်မပြေသောညစ်ပတ်ဆွေးနွေးချက်ထက်ပိုမိုဆိုးရွားအချက်အနည်းငယ်ရှိပါတယ်.
ပါးနပ်သော Be: explicit, nasty, sexy, ကအသည်းအသန်လိင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်အဖြစ်နှင့်ဂရပ်ဖစ်ညစ်ပတ်ဆွေးနွေးချက်အိပ်ခန်းသည်ကြီးလှ၏. ဒါပေမယ့်ညစ်ပတ်ပြောနေတာအခါသင်ပါးနပ်မှန်လျှင်, သင်ကသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်အဆက်မပြတ်သင်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရာတွင်အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုကိုဖန်တီးပေးသူအဖြစ်တစ်ဦးခိုင်နှစ်သက်သော effect ကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်. ပါးနပ်သောဖြစ်ခြင်း, တကယ်တော့, ညစ်ပတ်ပေရေပြောနေတာသည့်အခါအမှန်တကယ်တိကျပြတ်သားထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်စေနိုင်ပါတယ်.
ပါးနပ်သောညစ်ပတ်ဆွေးနွေးချက်နှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုသင်ရုံလောက်ဘယ်နေရာကမဆိုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်. ပါတီတစ်ခုကနေမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူထွက်ဆွဲထားဖို့အလုပ်ခွင်ဖြစ်ခြင်းမှ, ရိုးရှင်းတဲ့ “ငါသည်သင်ပြုချင်သောစိတ်ကိုအချို့သောပျော်စရာအမှုအရာရှိသည်အတိုင်းဤအခြားလူများပတ်ပတ်လည်မဟုတ်ကြဆန္ဒရှိ”, သင်စိတ်တွင်ရှိသည်ကြဘူးဆိုတာအံ့သြသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ချန်ထားမည်.
explicit, အိပ်ခန်းဆွေးနွေးချက်: ဒီအစွန်အဖျားကအထက်မှအတိအကျကိုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်နေစဉ်, ဂရပ်ဖစ်ညစ်ပတ်ဆွေးနွေးချက်လိင်ပူဖြစ်စေမည်, ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့, နှင့်ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန် – အဘယ်သူမျှမအိပ်ခန်းထဲမှာချင်တယ်မယ်ဆိုတာအတိအကျဘာကို. ကွာဒီအဲဒါကပျော်စေပျက်စေသဘောမှနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုတိကျပြတ်သားပဲ့ကိုင်သင်မခံပါနဲ့, sexy အိပ်ခန်းဆွေးနွေးချက်. ရိုးရှင်းစွာအယခုအချိန်တွင်အတွက်ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားနှင့်သင်တို့ကဲ့သို့ခံစားရဘာကိုစတင်ပေးလိုက်လာဆောင်မှာ “သင်သည်ငါ့ကို၏အတွင်းဘက်ကောင်းခံစားမိ”, ပေါ်မှာသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်သာမဟုတ်ဘဲအဖြစ်ကောင်းစွာ egos massage ပါလိမ့်မယ်. သင်ဆဲအာရုံကြောသို့မဟုတ်အဆင်မပြေခံစားရလျှင်, ပိုပြီးပြင်းထန် “Hmm”, “ဟုတ်တယ်”, နှင့် “ဘုရားသခင့ Oh” အစတူညီတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို.
Erotica: သေချာသလောက်ကတော့အလွယ်ကူဆုံးအစွန်အဖျား erotica သို့မဟုတ် Romance တ္ထုကိုဖတ်ပါရန်ဖြစ်သည်. သူတပါးတို့သည်သင်တို့၏ညစ်ပတ်ပြောနေတာ repertoire ချဲ့ထွင်ပါလိမ့်မယ်သင်မူကား, အခြေအနေများသည်များစွာသောအတွေးအခေါ်များကိုပေးမည်မသာ, အယောင်ဆောင်ကာအတွေ့အကြုံယူသည်, နှင့်သင်စွန့်ခွာဖို့အပြင်လိုင်းများကိုသင် steamy မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုဖတ်ရှုခြင်း Finish အထူးသဖြင့်နောက်သို့.
သင်လအနည်းငယ်သို့မဟုတ်ဆယ်နှစ်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူရှိနေသောပဲဖြစ်ဖြစ်, ညစ်ပတ်ပေရေပြောနေတာအားကောင်းနှင့် excite နိုင်, သင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုလုံးအသစ်အဆင့်ကိုထည့်သွင်း.
ငါလိုလူမျိုးတစ်ယောက်ယောက်ကြည့်ပါ – ယခုအဘယ်အရာကို?